महासंघ पार्टी राजनीति गर्ने थलो होइन : मनिषलाल प्रधान
Saturday, December 05, 2020 |शनिवार, मंसिर २०, २०७७
महासंघ पार्टी राजनीति गर्ने थलो होइन : मनिषलाल प्रधान मनिषलाल प्रधान -केन्द्रिय सदस्यका उम्मेद्वार
जनतापाटी शनिवार, मंसिर ६, २०७७, ११:२३:०० मा प्रकाशित
चुनावको प्रचार प्रसार कसरी गरिरहनु भइरहेको छ ?
चुनावी गतिविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संभव भएसम्मका साथीभाईसंग भेटघाट गरेरै मत माग्ने गरिरहेका छौं । संभव नभएका साथीभाईसंग टेलिफोन र सामाजिक संजालबाट पनि कुराकानी गरिरहेका छौं ।
माहोल कस्तो छ ?
चुनाव लड्ने हरेकलाई आफूले जित्छु भन्ने लाग्छ । तर, महासंघको अहिलेको निर्वाचनमा हामीले जुन मुद्धा उठाइरहेका छौं र त्यसप्रति साथीहरुले जसरी सकारात्मक रुपमा प्रतिकृया दिइरहनु भएको छ, त्यसबाट म मात्र होइन, किशोर प्रधानको नेतृत्वमा रहेको हाम्रो सिंग टिम नै चुनाव जित्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
चुनाव जित्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने साना तथा मझौला उद्योगहरुको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ । उसो त ठूला व्यवसायीहरुको पनि आफ्नै किसिमका समस्यामा रहेका छन् । तर सरकारको अलिकति पनि ध्यान जान सकिरहेको छैन् । हामीले कोभिडको मारले पिल्सिएर बसेका उद्योगहरु माथी उठाउन सरकारलाई घच्चघचाउने छौँ । चुनाव सकिएपछि सबै एकजुट भएर अघि बढने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ ।
भन्ने बेलामा व्यवसायिक संस्था भन्ने तर, महासंघको चुनाव जित्न पनि राजनीतिक पार्टीको आर्शिवाद लिने प्रवृत्ति हावि हुंदै गएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
कुनै व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको मतदाता वा समर्थक हुन सक्छ, तर, महासंघमा उसले पार्टी राजनीति गर्न पाउंदैन । महासंघ पार्टी राजनीति भन्दा माथि उठेको, विशुद्ध व्यवसायिक विचारको राजनीति गर्ने संस्था हो । त्यसैले तपाईले भन्नु भए जस्तो पार्टीगत राजनीति यहां हुंदैन ।
देशभर बाढी पहिरोमा परी ६० जनाको मृत्यु, २६ बेपत्ता आइतवार, असार २९, २०७६, १७:४६:००
एनआईसी एशिया बैंकका नियमित काउण्टर सेवा मात्र सञ्चालन हुने सोमवार, चैत्र १०, २०७६, २०:३२:००
महामारीपछिको पहिलो खेलमा डर्टमण्डको फराकिलो जित आइतवार, जेठ ४, २०७७, ०९:१३:००
‘नीतिगत व्यवस्था नहुँदा विप्रेषणको उपयोग गर्न सकिएन’
‘हेलम्बुबासी र मेलम्ची आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले चासो राखोस्’
‘हाम्रो आन्दोलनलाई दमन गरेर सिद्धाउँछु भन्नु आफ्नो चिहान आफैँ खन्नु हो’ - प्रकाण्ड
प्रचण्डको अराजनीतिक आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता भए विवाद सकिन्छ - विष्णु रिमाल
आयातमुखी व्यवसायीको वर्चश्व हुँदा निर्यात क्षेत्रमा समस्या भयो’
‘उद्योग वाणिज्य महासंघले साना व्यवसायीलाई हेपिरहेकाे छ, अब हामी प्रतिकार गर्छाैं’ - किरण डंगोल
प्रकाशक लक्ष्मी बिष्ट